The DutchtownSTL ဘလော့•စိန့်လူးဝစ္စ၊ ဒတ်ချ်တောင်းတွင်သတင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များ
နောက်ထပ်တစ်နှစ်ကြာတော့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းက ဆက်ရှိနေတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းသည် လူတိုင်းအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဒတ်ခ်ျမြို့ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ဆက်လက်တိုးတက်နေပါသည်။ ထိုအတွက်၊ ငါတို့အားလုံးဖြစ်သင့်တယ်။ Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ်.
Dutchtown Main Streets နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။
2021 ခုနှစ် နွေရာသီတွင်၊ ယခင်က Downtown Dutchtown (DT2 ဟု အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်သော အဖွဲ့အစည်း) သည် အမည်သစ်ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်- Dutchtown ပင်မလမ်းများ. အဖွဲ့အစည်းသည် ယခင်က Meramec နှင့် Virginia ဝန်းကျင်ဧရိယာများထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော နယ်ပယ်ရှိခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ကို အိမ်နီးချင်းများအား အသိပေးရန် အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားခဲ့ရသည်။ Dutchtown ရှိ လမ်းတိုင်းသည် Main Street ဖြစ်သည်။.
အောက်မှာ Filed Dutchtown ပင်မလမ်းများ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ် နှင့် Dutchtown ပင်မလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဧပြီလ 17th, 2022 .
Chippewa နှင့် Minnesota ရှိ Dutchtown-Gravois Park နယ်စပ်တွင်ထိုင်သော နှစ်ထပ်အဆောက်အဦသည် Lutheran Development Group ၏ ရုံးချုပ်မှ ကြောင်လေးထောင့်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အအုံသည် စတုရန်းပေ 7,700 ကျော် ကျယ်ဝန်းပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နေရာတစ်ခုဖြင့် ထောင့်စွန်းတွင် ကျောက်ချရပ်နားထားသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှု၊ သေနတ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အခြားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် လှုပ်ရှားမှုများအတွက် လူသိများသော Global Mart သည် ယခင်က စတိုးဆိုင်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ LDG သည် Global Mart ကို 2021 ခုနှစ်တွင် ပိတ်သိမ်းရန် အိမ်နီးချင်းများနှင့် လက်တွဲကာ Chippewa နှင့် Minnesota ၏ ထောင့်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအချို့ ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
LDG သည် ဧရိယာပျမ်းမျှဝင်ငွေ၏ 3025% သို့မဟုတ် အောက်နေထိုင်သူများအတွက် တတ်နိုင်လောက်သော တိုက်ခန်းရှစ်ခန်းကို အခြေခံမှစတင်ကာ 60 Chippewa ကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် စီစဉ်နေသည်။ ၎င်းတို့သည် ထောင့်စွန်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး စတုရန်းပေ 650 အတွက် သင့်လျော်သော အိမ်ငှားတစ်ဦးကိုလည်း ရှာဖွေနေမည်ဖြစ်သည်။
3025 Chippewa ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းကို ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးခြင်း။
ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 700,000 ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်း လှူဒါန်းမှုများနှင့် ရိုးရာဘဏ္ဍာငွေများအပြင်၊ ပရောဂျက်၏ ရန်ပုံငွေ၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းသည် စေတနာရှင် Missouri ပြည်နယ် အခွန်ခရက်ဒစ်များမှ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ တတ်နိုင်သောအိမ်ရာအကူအညီအစီအစဉ် (AHAP)။ လုပ်ငန်းများသည် Lutheran Development Group သို့ ပရောဂျက်အလိုက် လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ဤအခွန်ခရက်ဒစ်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် ခရက်ဒစ်များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခွန်တာဝန်ယူမှုကို မိရိုးဖလာ ပရဟိတအလှူငွေ ဖြတ်တောက်ခြင်းထက် ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် ထေမိပါသည်။
သင့်လှူဒါန်းမှုအပေါ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အခွန်သက်ရောက်မှု၏ ဥပမာ
(ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အခွန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ—ဤဥပမာသည် သရုပ်ပြရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။)
အသားတင်ဝင်ငွေ $100,000 ရှိသော လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် အခွန်တာဝန်ယူမှု $6,250 (ပုံမှန် Missouri လုပ်ငန်းအခွန်နှုန်း 6.25%) ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းသည် $10,000 ပရဟိတအလှူငွေထည့်ဝင်ပြီး ၎င်းတို့၏အခွန်ဆောင်ရသောဝင်ငွေမှတန်ဖိုးကိုနုတ်ယူသောအခါ ၎င်းတို့၏အခွန်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို $5,250 ($90,000 x 6.25%) သို့ လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း AHAP အခွန်ခရက်ဒစ်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အခွန်ဆောင်ရမည့်ဝင်ငွေ ကျဆင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏အခွန်များကို ဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာ လျော့ချပေးနိုင်သည်။ AHAP မှတဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏လှူဒါန်းမှု၏ 55% နှင့်ညီမျှသော အခွန်ခရက်ဒစ်များကို ရရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် အခွန်ခရက်ဒစ်တွင် ဒေါ်လာ 10,000 net $5,500 အတူတူ လှူဒါန်းပါသည်။ အထက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း တူညီသောဝင်ငွေနှင့် အခွန်နှုန်းထားဟု ယူဆပါက ပေးရမည့်အခွန်မှာ ဒေါ်လာ ၆,၂၅၀ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ နုတ်ယူခြင်းထက် အခွန်ခရက်ဒစ်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းသည် ၎င်းတို့၏ အခွန်ဝန်ကို $6,250 ဖြင့် ဖြေနိုင်သည်—၎င်းတို့၏ အခွန်ဘေလ်ကို $5,500 ဖြင့် ချန်ထားနိုင်သည်။ AHAP မှတဆင့် ရရှိနိုင်သော အခွန်ခရက်ဒစ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း၏ အပြုသဘောဆောင်သော အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးစဉ်တွင် သင့်လုပ်ငန်း၏ ပရဟိတဘတ်ဂျက်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ယန္တရားတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
AHAP အကျိုးပြုအခွန်ခရက်ဒစ်များနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော လှူဒါန်းမှုများအကြောင်း အချက်အလက်အတွက်၊ Vicki Schrader ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ vicki@ldgstl.org သို့မဟုတ် (314) 922-9573
Lutheran Development Group ၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ
2015 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ Lutheran Development Group သည် တောင်ပိုင်းစိန့်လူးဝစ်စီးတီးတွင် အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ဒေါ်လာ 35 သန်းကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ အိမ်ထောင်စု 200 ကျော်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော LDG ၏ အလုပ်တွင် တတ်နိုင်သော တိုက်ခန်းပေါင်း 200 ကျော်၊ တစ်အိမ်သားအိမ်ငါးလုံး ဖန်တီးခြင်း၊ လစ်လပ်နေရာ 140 ကျော်မှ ဒဏ်ရာများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပညာရေး၊ အနုပညာနှင့် ရပ်ရွာနေရာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။
အနာဂတ်ပရောဂျက်များတွင် စီစဉ်ထားသော ဒေါ်လာ သန်း 30 ကျော်ဖြင့် LDG သည် နှေးကွေးသွားခြင်းမဟုတ်ပဲ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နေထိုင်နိုင်စေရန်အတွက် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ပံ့ပိုးပေးသည့် မစ်ရှင်အတွက် လုံးလုံးလျားလျား မြှုပ်နှံထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာသေးမီက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ Marquette Homes တတ်နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း Dutchtown နှင့် Gravois Park သို့ရောက်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် တတ်နိုင်လောက်သော အိမ်ရာအကူအညီအစီအစဉ်မှတဆင့် ပေးဆောင်သည့် အကျိုးပြုအခွန်ခရက်ဒစ်များကို အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ Vicki Schrader ကို ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်လုပ်ငန်း၏လှူဒါန်းမှုကို ဆွေးနွေးရန်။
တစ်ဦးချင်း လှူဒါန်းမှုများကိုလည်း အမြဲကြိုဆိုနေပါသည်။ စိန်ခေါ်မှုတုို့ကနေတဆင့် Brown Sisters ဖောင်ဒေးရှင်းLDG သို့ လှူဒါန်းမှုအသစ် သို့မဟုတ် တိုးမြှင့်ခြင်းသည် အပိုပွဲတစ်ခုအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ပါသည်။ မင်းရဲ့အလှူကို ဒီမှာလုပ်ပါ။.
အောက်မှာ Filed အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ်, အိမ်ရာနှင့် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် မတ်လ 8th, 2022 .
အောက်မှာ Filed Dutchtown Dividend. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. Dutchtown Dividend နှင့် Dutchtown ပင်မလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15th, 2022 .
SLACO နှင့် Dutchtown Main Streets တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါ။
အပေါ် Posted ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4th, 2022
Dutchtown နှင့် ရပ်ကွက်စည်းရုံးရေးတွင် ပါဝင်လိုပါသလား။ သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိသည်။
Dutchtown ပင်မလမ်းများ ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အစည်း၏ ဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆက်ဆံရေးရုံးကို ရှာဖွေနေပါသည်။ စိန့်လူးဝစ္စလူထုအဖွဲ့အစည်းများအသင်း (SLACO). SLACO သည် 501(c)(3) ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် စိန့်လူးဝစ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်ကွက်များကို အားကောင်းစေသည့် အနှစ် 40 ရှိ သမိုင်းကြောင်းရှိသော၊ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်း ၃၃ ခု မြို့အနှံ့
SLACO မှတစ်ဆင့်၊ အခြား စိန့်လူးဝစ် ရပ်ကွက်များသည် လစ်လပ်မှု၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် အောင်မြင်မှု မည်သို့ရှာတွေ့နိုင်သည်ကို သင်ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် Dutchtown တွင် လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာများကို မျှဝေနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် အကြံပြုချက်ကိုလည်း လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ “မြို့နီးနားချင်းများ” အနေဖြင့်၊ မြို့အနှံ့ရှိ အခြားအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် Dutchtownသာမက စိန့်လူးဝစ်တစ်ခုလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
Dutchtown နှင့် SLACO တို့သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကောင်းမွန်သော မိတ်ဖက်များဖြစ်သည်။ အတူတူ စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်။ Keep It Clean ရပ်ကွက်သန့်ရှင်းရေး 2021 ခုနှစ် ဆောင်းဦးတွင် Marquette Park အနီးတစ်ဝိုက်တွင် SLACO သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစည်းရုံးရေး ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ ထို့ထက်ပို၍ ကျယ်ပြန့်သည်မှာ SLACO သည် Dutchtown အတွက် အတိုင်ပင်ခံနှင့် စည်းရုံးရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် Dutchtown Main Streets သည် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် SLACO ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သို့ အခြားတစ်ဦးအား ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dutchtown ၏ SLACO ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန် စိတ်ဝင်စားသော အသိုင်းအဝိုင်းမှ လျှောက်ထားသူများကို ရှာဖွေနေပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာ သင်သည် 18 နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ပြီး ပိုကြီးသော Dutchtown ဧရိယာတွင်နေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်စားလှယ်များအား SLACO ၏ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန်နှင့် Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများ—Dutchtown Main Streets၊ Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် အခြားအရာများ—SLACO ပဏာမခြေလှမ်းများနှင့် Dutchtown နှင့် ဖြစ်နိုင်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် စိတ်ပါဝင်စားသော email ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ info@dutchtownstl.org (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မှတဆင့် contact form) လျှောက်ထားသူသည် ၎င်းတို့၏အိမ်နီးနားချင်းများထံ အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများ ပြန်လည်ရရှိလာစေရန် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် လျှောက်ထားသူသည် SLACO တွင် Dutchtown ကိုမည်ကဲ့သို့ကိုယ်စားပြုရမည်အတွက် ၎င်းတို့၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့် အတိုချုံးအကြံပြုချက်တို့ကို ပေးဆောင်ပါ။ ဤသည်မှာ အခကြေးငွေမရသေးသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းရာထူးဖြစ်သည်။
အောက်မှာ Filed Dutchtown ပင်မလမ်းများ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. Dutchtown ပင်မလမ်းများ နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4th, 2022 .